Ireo mpilatsaka hofidina politika dia hahazo 2,900 $ amin'ny doka maimaimpoana avy amin'ny FreeSpace Social, Inc.
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ireo mpilatsaka hofidina politika dia hahazo 2,900 $ amin'ny doka maimaimpoana avy amin'ny FreeSpace Social, Inc.
FreeSpace Social dia manambara fa hanome $ 2,900 amin'ny doka maimaimpoana ho an'ireo mpilatsaka hofidina federaly federaly rehetra nanatevin-daharana ny sehatra izy ireo, ho fandraisana an-tanana na inona na inona antoko.
Ireo kandidà politika dia mendrika ny fotoana rehetra atolotra amin'ny besinimaro ny hafatr'izy ireo raha tsy misy ny lalàna henjana amin'ny doka politika mifandraika amin'ny tambajotra sosialy mahazatra. FreeSpace dia mampihatra antonony tsara nefa hentitra, ampiharina ny fampiatoana ny kaonty amin'ny karazana votoaty vetaveta na tsy mendrika rehetra. Na izany aza, ny orinasa dia mampiseho fihetsika ekena kokoa noho ny mpiara-miasa aminy Big Tech rehefa miresaka dokam-barotra, indrindra ny fahasalamana hafa, ireo vondrona ara-pinoana, ireo fikambanana mpanao trafika olona, ​​ary ny fampielezan-kevitra politika bi-partisan.
Ireo mpilatsaka hofidina voalaza fa maniry handray anjara amin'ny tolotra doka maimaimpoana amin'ny FreeSpace dia takiana mba handefa kopian'ny taratasy fanambarany FEC mba hahafeno fepetra. Ireo Kandidà nambara dia hanana ny mombamomba ny FreeSpace avy hatrany koa voamarina rehefa nahazo sy nankatoavina ny endrika FEC.
"Miarahaba ny kandidà avy amin'ny vondrona politika rehetra izahay hanararaotra an'ity fanolorana dokambarotra maimaimpoana ity eo amin'ny sehatra misy anay," hoy ny CEO CEO FreeSpace, Jon Willis. "Ny fanantenanay dia hahafahan'ny besinimaro mahalala bebe kokoa an'ireo mpilatsaka hofidina mifanaraka amin'ny soatoavin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo."